Vaovao - Runjin dia nanao fivoriana matotra momba ny fomba hitazomana mafy ny fihanaky ny korona amin'izao fotoana izao.
Runjin dia nanana fivoriana matotra momba ny fomba hitazomana mafy ny fihanaky ny korona amin'izao fotoana izao.
Any Shina eto an-toerana dia mihamaro ny tanàna nanomboka niverina tamin'ny fiainana ara-dalàna, ary niverina niasa tamin'ny birao toy ny mahazatra. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fametrahana sy ny komisiona.
Ho an'ny tetik'asa any ampitan-dranomasina mitohy, dia hanomboka fanaraha-maso lavitra na torolàlana amin'ny komisiona tranokala izahay. handray andraikitra amin'ny Internet izahay hamahana olana amin'ny fotoana rehetra hanohanana ny mpanjifa.
Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa vahaolana dia handany fotoana bebe kokoa ary hanao ezaka bebe kokoa hampivelatra ny teknolojia milina gilasy .Hanao fifaninanana bebe kokoa izahay, hahatonga ny vokatray hahomby kokoa.
Matokia rehefa hanjavona ny virus corona, mandeha ara-dalàna ny zava-drehetra .Ny orinasanay, ny ekipanay dia afaka manome fahafaham-po bebe kokoa ny mpanjifa, ary manome lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa.
Fotoana fandefasana: Aug-05-2020